Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 50
Tsara ve raha manaisotra ny faniriany hanao firaisana ny lehilahy, ary tokony hiezaka hiaina fiainam-pianakaviana izy?
Izany dia tsy maintsy miankina amin'ny antony manosika sy ny toetran'ny lehilahy. Tsy tsara indrindra ny manandrana mandetika na mamono ny filan'ny nofo; fa tsara indrindra indrindra raha hanakana sy hifehy izany. Raha tsy manana zavatra na tsara indrindra noho ny firaisana ara-nofo ny olona iray; raha mifehy ny biby ny olona; ary raha misy miaina hiaina sy hankafizany, handinihana ny fahafinaretana amin'ny firaisana ara-nofo, tsy afaka atao ny manandrana mamono na mamono ny faniriany ara-nofo - na dia afaka "miaina fiainana celibacy."
Araka ny «Rakibolana mahazatra», dia midika hoe: "ny toetry ny olona tsy manambady na manambady, indrindra fa ny lehilahy tsy manambady; mifady amin'ny fanambadiana; toy ny, ny fitiavan 'ny fisoronana. ” Ny celibate dia voalaza fa, "izay mijanona tsy manambady; indrindra fa ny lehilahy iray mifatotra amin'ny voadim-pinoana. ”
Ny olona izay manana fahaiza-manao ara-batana sy ara-tsaina dia manambady, nefa miaina fiainana an-dehilahy mba hialana amin'ny fifamatorana, andraikitra ary vokatry ny fanambadiana, ary tsy manana ny sitrapony na ny faniriana hifehy ny maha-lehilahy azy. ny zanak'olombelona, ​​na izy na tsy afaka amin'ny voady, na izy na tsy nandray baiko ary dia eo ambany fialofana sy fiarovana ny fiangonana. Ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fahadiovan'ny eritreritra dia ilaina amin'ny fiainana mampihetsi-po amin'ny olona izay hiditra ao amin'ny fanahin'izany fiainana izany. Vitsy ny celibates, ireo tsy manambady, izay tsy dia miankin-doha amin'ny eritreritra sy ny fihetsika tsy mitovy amin'ny olona miaina ao amin'ny fanjakana manambady.
Ny olona mahatsapa ao an-trano eto an-tany ary manana fanambadiana ara-batana, ara-pitondran-tena, ara-tsaina dia matetika manao tsinontsinona ireo adidy sy andraikitra shirk amin'ny alalan'ny fijanonana ho tsy manambady. Ny antony hivelomana amin'ny fiainam-pianakaviana dia tsy tokony: fandroahana amin'ny fatorana, adidy, andraikitra, ara-dalàna na amin'ny fomba hafa; voady, fivalozana, didim-pivavahana; hahazoana tombony; ahazoana valisoa; hahatratrarana fiakarana amin'ny hery ara-nofo na ara-panahy. Ny antony hiaina fiainana celibate dia izao: ny olona iray dia tsy mahavita ny adidy nomeny ny azy ary maniry ny hanatanteraka azy, ary miaraka amin'izany koa, mahatoky amin'ny adidy mifanaraka amin'ny fanjakana manambady; izany hoe ny fiainam-panambadiana dia tsy mendrika azy amin'ny asany. Tsy midika akory izany fa ny asa sasany na fadin-jaza dia antony iray mitazona ny iray tsy manambady. Tsy misy asa na asa no anton-draharahan'ny fampisamborana. Ny fanambadiana dia tsy manakana ny atao hoe fiainana ara-pivavahana na "ara-panahy". Ireo birao ara-pinoana izay ara-pitondran-tena dia afaka fenoina koa ireo manambady toy ny tsy manambady; ary matetika miaraka amin'ny fiarovana bebe kokoa amin'ny mpampikonfesy ary miaiky izany rehefa tsy manambady ilay mpikonfesy. Ny olona manambady dia mazàna manome fahaizana bebe kokoa noho ny olona tsy niditra tao amin'ny fanjakana nanambady.
Ny fanavakavahana dia ilaina amin'ny olona tapa-kevitra ny tsy ho faty. Fa ny antony manosika azy hiaina amin'ny mahavelona dia tokony hanao izay tsara kokoa noho ny olombelona izy. Ny fieken-keloka dia tsy toerana andehanana hiditra ny lalana mankany amin'ny fiainana tsy mety maty; ary rehefa lavitra ny lalana izy dia hanana asa lehibe kokoa. Ny olona mendrika ny miaina an-dehilahy dia tsy hahalala izay adidiny. Izay mendrika ny miaina celibate dia tsy misy faniriana ara-nofo; fa tsy manandrana manorotoro izy na hahafaty azy. Mianatra ny fomba famerana sy hifehezana azy Izy, Izy no mianatra ary manao amin'ny faharanitan-tsaina sy ny sitrapo. Ny olona iray dia tsy maintsy miaina fiainana celibacy izay noeritreretina, alohan'ny ahafahany tena izy. Avy eo dia velona ho an'ny rehetra izy, tsy misy ratra ho an'ny tenany na amin'ny hafa.